10/12/2010 - Holafitra mpisolo vava: filoha vaovao ny mpiaro ny filoha Ravalomanana
Androany maraina no nanao fianianana ny Filoha vaovaon’ny Holafitry ny Mpisolovava eto Madagasikara dia ny Me. Radson Solo izany. Efa ela nihetezana teo amin’ny sehatry ny fitsarana ity mpisolovava ity ary isan'ireo mpisolo vava ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Nandritry ny taona maro no niaro ny orinasa TIKO ny Me Radson ary mbola manohy miaro ny tombotsoan’ity orinasa ity . Manam-pahaizana manokana momba ny fifanarahana iraisampirenena izy ary efa mpampianatra ao amin’ny Sekoly ambony mampiofana mpisolovava eto Madagasikara ihany koa.
RADSON_SOLO.pdf 55.66 Ko
16/11/2010 - May kila ny foiben’ny AKFM (+audio+vidéo)
Nanomboka tamin’ny 06 ora sy sasany hariva teo no nirehitra ny foiben’ny antoko AKFM KDRSM eo Andravoahaangy ambony. Araky ny nambran’ny mponina manodidina dia nanomboka tao amin’ny lakozy iray ny afo aary nitatraa vetivety satria nisy trano hazo maromaro teo amin’ny manodidina. Tsy nisy nahalala izay fototra niavian’ny afo fa ilay toerana fandrahoaana sakafo efa niledaleda no tazan’ny mpiara-monina. Fianakaviana efatra no tsy manan-kialofana amin’izao fotoana noho ity hain-trano ity. Rah any tao amin’ny foiben’ny AKFM kosa dia voalaza fa tsy nisy afa-tsy vata fandraisam-peo iray no sisa avotra.
Sary foibe AKFM
Ilay fiara nirehitra teo Ankaditapaka kosa dia nifano antsasakadiny tamin’ity haintrano ity. Rah any filazan’ny manodidina dia Taxi-be mampitohy an’Ankatso sy Antanimena io nirehitra io. Tamin’ny fotoana nandalovana teny an-toeran dia efa tsy teo intsony ialy fiara fa ny marika teo amin’ny arabe no nahafantarana fa tsy nisy noraisina intsony izany Taxibe izany.
Sary faritra nahamay ilay taxibe
10/11/2010 : Mihombo ny ferin’ny Anjerimanontolo
Niara- nitokona ny tokotelo mahamasanahandro eny amin’ny anjerimanontolo androany. Niombonan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpandraharaha ary ny mpianatra ny fibanjinanan ny hoavin’ny anjerimanontolo eto Madagasikara.
Ny mpianatra dia nanamafy fa tompondakan’ny fitokonana ny teny Ankatso tamin’ity. Amin’izy ireo dia midika ho tsy fahaiza-mitantana eo amin’ny Ministera mpiandraikitra izany. Fanontaniana napetrak’izy ireo ny hoe :”fa maninona no tsy maintsy mihetsika foana ny anjerimanontolo vao henoina.
Ireo mpandraharaha dia nanambara fa “tsy ekena intsony ny tsy fitovian-jo eo amin’ny mpiara-miasa”. Betsaka loatra hoy izy ireo ny elanelan’ny marikarama eo amin’ny mpiasam-panjakana ka tsy maintsy ahitsy izany mba hitovy tantana.
Ankoatry ny fitakiana 14 notapahin’ny SECES Nasionaly dia nitondra fanazavana momba ny antsojay sy ny fanaovana zinna ny mpampianatra mpikaroka ny mpandrindra ny “direction collegiale ». Nitondra fanazavana manokana ny momba ity rafitra vaovao najoro ity ka tamin’izany no nahafaantaraana fa fanarahana ny sata mifehy ny mpampianatra mpikaroka ihany izany.
09/11/2010 - Ambohitsaina : tsy naharesy ny maro ireo mpamono afo (+vidéos)
Ny tokotelo mampiodina ny anjerimanontolo mihitsy no mitokona eny Ambohitsaina. Na dia nezahina nosoparana aza ny hetsiky ny mpampianatra mpikaroka dia mbola mitohy ihany izany hatramin’ny androany. Nijoro hatrany nanotrona ireto “Raiamandreny” ireto ny fikambanan’ny mpiannatra eny Ankatso. Araky ny rafitra mipetraka any amin’izany toeram-pampianarana izany dia ireto “Association Pédagogique” ireto ihany no afaka miteny amin’ny anaran’ny mpianatra.
Nambaran’ny mpitondra tenin’ny mpianatra fa “tsy mendrika ny fampianarana ambony intsony ny fampiadiana toy ny nitranga omaly”. Manameloka tanteraka ny fihetsika nataon’ireo mitonona ho mpianatra ka nanakorontana ny hetsiky ny SECES omaly izy ireo :
Niteraka ady hevitra teo amin’ny ankolafy roa moa ity zava-mitranga eny amin’ny anjerimanontolo ity avy eo. Ireo mpianatra manohitra ny hetsiky ny SECES dia nilaza fa tsy maintsy miverina mianatra haingana satria mijaly ny tanora. “Aleo vahana ifotony mihitsy ny olana” hoy kosa ireo fikambanan’ny mpianatra “mba hialana amin’ny fitokonana lavareny toy izao”. Nambaran’ireto farany fa hatramin’ny fiandohan’ny taom-pianarana no mankaty dia imbalo no nisy fitokonana teny Ankatso.
Mitokona koa ny mpandraharaha
Hanatevin-daharana ny fitakiana ataon’ny fiarahamientan’ny Mpiasampanjakana Malagasy ihany koa ny mpandraharaha eny amin’ny fampianarana ambony. HItaky ny fitovian-jo amin’ny samy mpiasam-bahoaka izy ireo ary tsy hiasa manomboka rahampitso Alarobia 10 Novambra 2010.
06/11/2010 - Fanondranana an-tsokosoko Bois de rose : TGV no mpanome alalana(+Vidéo)
Nivoaka ary miparitaka eran'ny interneto amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana iray nataon'ny news.mongabay.com. Hita taratra ato anatin'ity fanadihadiana ity ny filazana fa "isan'ireo tsy afa-miala amin'ny fanondranana ny bois de rose eto Madagasikara, i TGV". Dia mbola ho sahy handà ihany ve ? Izy no fototry ny fahasimban'ny firenena malagasy. Tsy vitan'ny efa nanongam-panjakana fa mbola mivarotra tanindrazana ihany. Ny mampalahelo dia vahoaka tsy manan-tsafidy no mizaka izao hadalàny izao.
Dia mbola hangina ihany ve ?
05/12010 - SECES : « Tsy olon’ny fifanajana Ministry ny Fampianarana ambony » (+vidéo)
Volana maro izao no nitokona nitaky ny zony sy ny fampihodinana amin’ny ara-dalàna ny anjerimanontolo Malagasy. Hatramin’izay nanombohan’ny fitokonan’ireto mpampianatra mpikaroka ireto dia tsy mbola nangataka hifampiraharaha mihitsy ny Minisitra mpiahy azy ireo fa toa manala baraka ny mpiara-miasa aminy eny amin’ny haino amanjery no ataony. “Izany no isan’ny mahatonga anay hitaky ny fialany” hoy ny mpandrindra ny hetsika fitakiana ataon’ny SECES. Ankoatra ireo zo fototra tsy voaefan’ny HAT dia toherin’izy ireo ny fitondran-tena tsy manaja olona ananan’ity mpiahy azy ireo ity. Manomboka androany ary, araky ny filankevitra nasionalin’ny mpampianatra mpikaroka, dia mikatso tanteraka ny anjerimanontolo manerana ny nosy.
REVENDICATIONS_SECES_NATIONAL.pdf 371.72 Ko
04/11/2010 - Fianakaviana mitsinjo lavitra : nipoaka ny sarom-bilany … (+vidéo)
Araky ny fotoana nifanomezany tamin’ny vahoaka Malagasy dia nanatanteraka hetsika fanairana manoloana ny Tahala Rarihasina ny “Fianakaviana mitsinjo lavitra”. Melohin’izy ireo ny tsy fijerena ny tena olana fototra fa firotorotoana hanatanteraka fitsapankevi-bahoaka. Ireo sorabavety dia niteny hoazy satria nanambara ny tena fahoarian’ny vahoaka noho ny krizy tsy mety mivaha. Maro ny vehivavy tonga nanafana izany hetsika izany ary heno manodidina an’Analakely ny fipoakan’ny sarom’bilany izay hany fitaovana mbola azo ampiasaina noho ny tsy fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Sary "Fianakaviana mitsinjo lavitra"
28/10/2010 - Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana : amin'ny 01 Novambra eny Antsahamanitra ny fotoana (+vidéo)
Eny Antsahamanitra indray ny fotoana manaraka omen’ny hetsiky ny mpitondra fivavahana. Mahatsapa ireo mpitarika eo anivon’ity hetsika ity fa dia tonga ny fotoana ilavan’ny mpino kristiana fampaherezana. Tsy mbola vita ny ady, tsy mbola mivaha ny krizy , noho izany mitohy ny hetsika.Na dia nisy 5 volana aza no tsy nahenoana ireto mpitondra fivavahana ireto dia tsy nivoana amin’ny tanjona napetrany hatramin’izay ity fikambanana ity. « Ny fifampiresahana sy ny fihavanan’ireo olona tena miady » no filamatra hivoahana amin’ny krizy hoy ireto mpitondra fivavahana ireto .
Nanambara ireto mpitondra fivavahana ireto fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny hetsiky ny vondrona kristiana laika ny hetsiky ny mitondra fivavahana. Sasan'angy samy hafa nefa tsy misy fifandirana hoy ireto mpitonda fivavahana ireto.
Miantso ireo rehetra maniry ny hifaranan'izao krizy izao izy ireo ny Alatsinainy ho avy izao amin'ny 2 ora sy sasany eny Antsahamanitra.
HMF2810.pdf 650.24 Ko
HMF.pdf 228.5 Ko